Farmaajo “Itoobiya waxaa ay joojisay faragalintii ay ku haysay Soomaaliya” – Radio Daljir
Farmaajo “Itoobiya waxaa ay joojisay faragalintii ay ku haysay Soomaaliya”
Nofeembar 15, 2018 4:43 b 0
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay Itoobiya inay joojisay faragalintii ay ku haysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Farmaajo oo ka hadlayay xiriirka cusub ee Itoobiya iyo dowladaha gobolka ayaa waxaa uu sheegay Itoobiya inay muddo dheer faragalin ay ku haysay gudaha Soomaaliya, taasi oo xiligaan uu soo afjaray raysal wasaaraha cusub ee Itoobiya Abey Axmed.
Waxaa uu soo dhoweeyey isbadalada gobolka Geeska Afrika ee uu hormuudka ka yahay raysal wasaaraha Itoobiya Abey Axmed.
Itoobiya ayaa xiriir la lahayd maamulada kajira dalka Soomaaliya kuwaasi oo midba si gaar ah ay ula macaamili jirtay, arrintaasi oo xiligaan muuqan, waxaana arrintan lagu tilmaamay guul umadda Soomaaliyeed usoo hoyatay.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa ah kuwa ku kala aragti duwan oo isku khilaafsan siyaasadda iyo qaab nololeedka deegaanka, taasi oo curyaamisay inay la tartamaan dhigooda kalle ee dunida, waana kuwa iyaga kaliya isu jeeda ama is eegta, loona adeegsan jiray in madaxa la isku geliyo.